TINOGONESA ZVIMWE ZVIPO.
Iyo inoshanda webhusaiti iyi zvakare iri Sangano PixelHELPER International kuMorocco.
Yepasi rose inoshanda mhizha yemhanzi inomiririrwa zviri pamutemo nesamburela sangano:
Pixel Mubatsiri International
Mutungamiri: Oliver Bienkowski
Kutonga ndeye Marrakech, Morocco
Uye isu tinoti: Isu tiri PixelHELPER. Izvi ndizvo zvatakafungidzira. Kana iwe uchida kutimhan'ara, tinokurudzira gweta rakanaka kuMorocco. Kune vese vamwe vanobatana, shamwari & vatsigiri, saiti iyi inoshandirwa nesangano repasi rese PixelHELPER International kuMorocco. Pamwe chete nemamwe mapoka ePixelHELPER muBrazil, Europe & Asia, isu tinorwira kodzero dzevanhu & ino pindirana rubatsiro rwekukurumidzira mune yedhijitari yehupenyu. Pasi rese.
Zvitendise wega nebasa redu rakakosha mumishumo yezviitiko zvedu. Iwe unopfuura makumi mashanu neshanu here? Hama dzako dziri kukutsamwisa here? Ita kuda uye upe chikamu kune kodzero dzevanhu nguva isati yanonoka.
Nezvese euro zvechipo chako tinokwanisa kuseenzesa zvinoshamisa zvirongwa zveumhizha kuchengetedza huwandu hwevanhu. Pnguva imwechete, iwe unogona kushandisa fomu yedu yekupa kuti uite zvinangwa zvakayerwa zvekubatsira mukusimudzira muAfrica kana zvirongwa zvezvakatipoteredza.
Protesitendi paMumiriri weSaudi Arabia
PixelHELPER mutsigiri Nuseir Yassin parwendo rwake rwenyika rweRubic Cube
Kufungidzira kwePixelHELPER July 1st, 2020Oliver Bienkowski